Uluhlu 2.. Funda iTheyibhile yokuPhindaphinda kuka-2
Itheyibhile ye-2 yenye yezona zilula. Le thebhile ithetha ukuba yonke into ephindaphindwe ngo-2 izakuphinda-phindwa, ngendlela yokuba 4 × 2 = 8 (Oko kukuthi, 2 umphinda-phinde 4). Naliphi na inani esilisebenzisayo ukuphindaphinda ngo-2 iyakuba leliphinda kabini elo xabiso.
Masiyicacise ngcono, ukuba kukho iilamuni ezi-5 kwibhasikithi nganye kwaye sineebhasikithi ezi-2, siya kuba ne-5 × 2 = iilamuni ezili-10. Njengoko sibona, naliphi na inani esiliphindaphinda kule tafile liza kuphinda-phinda, ngoko ke i-100 liphindaphindwe ngo-2 liyakuba ngama-200.
Le theyibhile uza kuyisebenzisa kakhulu ebomini bakho. Yitafile oza kuyisebenzisa kakhulu, ngakumbi xa uthenga, kuba xa usiya evenkileni kwaye uthenga ii-t-shirts ezimbini ezilinganayo zexabiso elifanayo, uyakuqonda ukuba ngophinda-phindo lwetheyibhile yesi-2 uzokwazi ixabiso abanalo.
Iimpawu zetheyibhile e-2 :
• Enye yeetafile eziphindaphindayo nayiphi na imali.
• Naliphi na inani eliphindaphindwe ngesi-2 liyakuhlala liphindaphindwe lelo nani.
• Itheyibhile yesi-2 iya kusinceda ukuba sazi kabini ixabiso lalo naliphi inani okanye izinto ezithile.
• Ukuba sineengxowa ezi-2 kwaye kukho ii-apile ezi-5 kwingxowa nganye, ke sine-2 × 5 = i-apile eli-10.
• Ukuba sineengxowa ezili-10 ezineebhanana ezi-2 inye, siyakuba ne-10 × 2 = iibhanana ezingama-20.
• Ukuba sineengxowa ezi-2 kwaye ibhegi nganye ineebhola ezi-4, siyakuba ne-2 × 4 = iibhola ezi-8.